Messaggio a Medjugorje: la Madonna ci dice la verità sul mondo attuale... | PREGHIERA&NEWS
Ozi nye Medjugorje: Nwaanyị anyị na-agwa anyị eziokwu banyere ụwa dị ugbu a ...
Paolo Tescione	Edere ya June 18, 2020 June 18, 2020
Eprel 14, 1982
You ga-amararịrị na Setan dị. Otu ubochi o guzoro n’iru oche-eze nke Chineke ma rio ka enye ya ikike ka o nwaa Nzuk] Kraist nwa oge nwaji ibibi ya. Chineke kwere ka Setan nwalee Chọọchị a maka otu narị afọ ma gbakwunye ya: won't gaghị emebi ya! Afọ a nke ị bi n’ime ya dị n’aka Setan, ma mgbe a ga-ahụta ihe nzuzo ndị enyere gị n’aka, a ga-ebibi ike ya. Ugbua ọ malitere ike ya, yabụ ọ ga - akp ụdị ọgụ ọzọ: ọ na-emebi alụm di na nwunye, na-ebilite esemokwu ọbụna n'etiti mkpụrụ obi dị nsọ, na-akpata ọgba aghara, na-akpata igbu ọchụ. Chebe onwe-unu site na ibu onu na ikpe ekpere, karie ekpere ndi obodo. Butekwa ihe ndị a gọziri agọzi ma tinye ha n'ụlọ gị. Ma maliteghachi iji mmiri dị nsọ!
Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ụfọdụ nwere ike inyere anyị aka ịghọta ozi a.
Agwọ a kacha aghụghọ n’anụ ọhịa niile nke Onye-nwe Chineke Chineke mere. Ọ sịrị nwanyị ahụ: “Ọ̀ bụ eziokwu na Chineke sịrị: Unu erila mkpụrụ osisi ọ bụla dị n’ubi a?”. Nwaanyị ahụ zara agwọ ahụ, sị: "N'ime mkpụrụ nke osisi nke ogige a, anyị nwere ike iri ya, mana site na mkpụrụ nke osisi nke dị n'etiti ubi ahụ ka Chukwu siri: E erila ya, ị gaghị emetụ ya aka, ma ọ bụghị na ị ga-anwụ". Ma agwọ ahụ gwara nwanyị ahụ: “will gaghị anwụ ma ọlị! N’ezie, Chineke maara na mgbe ị riri ha, anya gị ga-emeghe, ị ga-adịkwa ka Chukwu, mara ihe ọma na ihe ọjọọ ”. Nwaanyị ahụ wee hụ na mkpụrụ osisi ahụ dị mma iri, nke na-atọ ụtọ n'anya ma na-achọsi ike inweta amamihe; o we rie nkpuru, rie, mb gavee di-ya, nye ya di-ya, ya onwe-ya we rie. Ha abụọ wee meghee anya ha wee hụ na ha gba ọtọ; Ha kpachaara akwụkwọ fig wee mere onwe ha ihe mkpuchi. Ha we nu Onye-nwe-ayi Chineke ka Ọ n walkingje ije n’ime ubi ahu abali nke ehihie, nwoke ahu na nwunye-ya we zobe onwe-ha n’ebe Onye-nwe-ayi Chineke nọ n’etiti osisi nke di n’ubi ahu. Ma Onye-nwe Chineke kpọrọ nwoke ahụ wee sị ya, “Olee ebe ị nọ?”. Ọ zaghachiri, sị: "Anụrụ m nzo ukwu gị n'ubi a: m na-atụ ụjọ, n'ihi na agba m ọtọ, m wee zoo onwe m." Ọ gara n'ihu: “letnye mere ka ị mara na ị gba ọtọ? I riri mkpụrụ sitere n’osisi nke m nyere gị n’iwu ka ị ghara iri? ”. Nwoke ahụ zara, sị: "Nwaanyị ahụ i debere n'akụkụ m nyere m osisi, m wee rie ya." Onye-nwe Chineke siri nwanyị ahụ, “Gịnị ka i mere?”. Nwaanyị ahụ zara, sị: "Agwọ aghọgbuola m na m riri."
Jehova, bú Chineke, we si agwọ ahu: N'ihi na i mewo nka, buru onye anābu ọnu ka ị kari n’ime anumanu niile na kari anumanu niile; Afọ gị ka ị ga-eji jee ije, ọ bụkwa ájá ka ị ga-eri ụbọchị niile nke ndụ gị. M ga-etinye iro n’etiti gị na nwanyị ahụ n’etiti agbụrụ gị na usoro ọmụmụ ya: nke a ga-akụri isi gị, ị ga-emerụkwa ya n’ikiri ụkwụ ”. Ọ gwara nwanyị ahụ, sị: “M ga-eme ọtụtụ ihe mgbu gị na afọ ime gị, n'ihe mgbu ị ga-amụ ụmụ. Uche gị ga-adị n’ebe di gị nọ, ma ọ ga-achị gị. ” Ọ gwara nwoke ahụ, sị: “N'ihi na i gewo ntị n'olu nwunye gị, i wee rie mkpụrụ sitere n'osisi ahụ, nke m nyere gị iwu banyere ya: erila ya, zọpụ ala n'ihi gị! Nime ihe-nb youu ka I g drawri nri rue ubọchi nile nke ndu-gi. Ogwu na uke ga-ewetara gị ahịhịa, ị ga-erikwa ahịhịa ndụ. Ọsụsọ nke ihu gị ka ị ga-eri nri; rue mgbe ịlaghachi n’ụwa, n’ihi na ewepụtara gị ya: ọ bụ n’ájá ka ị bụ, ọ bụ n’ájá ka ị ga-alaghachi! ”. Nwoke ahụ kpọrọ nwunye ya Eve, n’ihi na ọ bụ nne nke ihe nile dị ndụ. Jehova, bú Chineke, we were akpukpọ madu me ha uwe. Onye-nwe Chineke Chineke kwuziri, sị: “Lee, mmadụ ahụ adịwo ka otu onye n’ime anyị, maka ịmara ezi ihe na ihe ọjọọ. Ugbu a, ka ọ ghara esetịpụ aka ya ma ghara ịnara osisi nke ndụ, rie ya ma dịrị ndụ mgbe niile! ". Onye-nwe Chineke chụpụrụ ya n’ubi Iden, ka ọ rụọ ọrụ ala ebe esiri wepụta ya. Ọ chụpụrụ nwoke ahụ ma tinye cherọb na ire ọkụ nke mma agha ya n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke ogige Iden, ka ọ na-eche ụzọ nke osisi nke ndụ ahụ.
Nke gara aga Post Gara aga post:Jizọs kpughere ofufe a maka ajọ mmehie nke merụrụ ya ahụ
Next Post → Post ozo:Mkparịta ụka mụ na Chineke nwere "ị gaghị ebi nanị site na achịcha"